Kala-sooc, midab, adeegsi iyo kala-soocid xaddididda dhiigga ee xididdada dhiig-baxa
Tuboyinka Dhiiga Dhiiga
Cirbadaha aruurinta dhiiga
Tuuri kara VTM Tube
Nidaamka Sumeeynta Qalabka Tooska
Wararka & Aqoonta
Su'aalaha la isweydiiyo
Uruurinta dhiiga uruurinta dhiig karka dhiigga ee xun ee uruurinta dhiigga, soo bixitaanka aalado badan oo qalabyo otomaatig ah iyo baaritaan caafimaad oo casri ah oo looga baahan yahay keydka dhiigga, kaliya maahan tiknoolajiyadda aruurinta dhiigga, laakiin sidoo kale shuruudaha aruurinta dhiig-karka, ka dib waxa dhulka ku jira. midabyo kala duwan ayaa koofiyadu matalaan?
1. Koofiyadaha cas: tuubbada dhiiga ee caadiga ah;
2. Koofiyaha Orange: tuubada xawaaraha degdega ah ee leh coagulant ee tuubbada dhiigga aruurinta si loo dardar geliyo nidaamka isku-qarinta. ;
3. Daboolka gaduudan ee guduudan: koollada kala-baxa iyo tuubada isku-xidhan; koolada kala go'ida iyo wakiilka coagulant waxaa lagu daraa tuubada aruurinta dhiigga;
4. Koofiyadda cagaarka: Heparin anticoagulant tube, oo heparin lagu daray tuubada aruurinta dhiigga;
5. Koofiyadda cagaarka ah ee fudud: Tuubbada kala-baxa Plasma. Heparin lithium anticoagulant ayaa lagu darayaa tuubbada kala go'ida ee tuubbada caagga ah si loo gaaro ujeeddada kala go'idda plasma dhakhsaha leh;
6. Koofiyad cufan: tuubada anticoagulant ee EDTA, ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA, miisaanka molikalikada 292) iyo cusbada milixda leh ee loo yaqaan 'amino polycarboxylic acids' oo si wax ku ool ah u calali kara ion kaalshiyamka saamiyada dhiigga. Jeerinta kaalshiyamka ama ka saarida goobta fal-celinta ee kaalshiyamka ah waxay xannibi doontaa oo joojineysaa hanaankii isku-daridda ama isku-darka, taasoo markaa ka hor-istaagaya saamballada dhiigga ee isku-qooska.
7. Koofiyadda khafiifka ah ee buluuga ah: tuubbada tijaabada sodium citrate, sodium citrate waxay ka ciyaaraa ka hortag xasaasiyadeed inta badan iyada oo la adeegsanayo ion-ka-kaalsiyam kaarmooyinka dhiigga ah.
8. Daboolka madaxa madow: tuubada tijaabada sodium citrate dhiiga. U fiirsashada sodium citrate ee loo baahan yahay baarista kala-goynta dhiigga waa 3.2% (oo u dhiganta 0.109mol / L) iyo saamiga daawada xinjirowga lidka ku ah dhiigga waa 1: 4.
9. Koofiyada cirridka ah: Xaydhka oxalate / sodium fluoride, ee xinjirowga lidka ku ah, ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa marka lagu daro oxalate potassium ama iodate sodium. Waxay u tahay wax-ku-ilaalin wanaagsan go'aan qaadashada gulukoosta dhiig, loomana adeegsan karo go'aaminta urea habka urease, ama go'aaminta alkaline fosfoolka iyo amylase.
Marka la eego amarada ururinta dhiiga iyo qeybinta dhiigga tuubooyin badan, haddii la adeegsanayo tuubbo tijaabo galaas ah: tuubada tijaabada dhiiga, tubada dhiiga oo aan laheyn daawada xinjirowga lidka ku ah, tuubada tijaabada sodium citrate anticoagulation tube, tubobo kale tijaabada xinjirowga lidka ku ah; Kala-soocidda tuubooyinka baaritaanka caagga ah: tuubbooyinka baaritaanka dhiigga dhiiga (huruud), tuubbooyinka sodium citrate anticoagulant-ka (buluug), tuubooyinka qalliinka leh ama aan lahayn dhaqdhaqaaqayaasha dhiigga isku-darka ama kala-baxa gel, tuubbarka heparin leh ama aan lahayn jaale (cagaar), tuubada anticoagulant ee EDTA (guduud. ), tubobojirooyinka gulukoosta dhiigga ee joojiya tuubooyinka baaritaanka (cawlan).
Waqtiga boostada: Jun-12-2020
Telefoon ： 0086-15130071914
E-mayl ： estherjiao@outlook.com
Cinwaanka ： Lambar 95, Wadada Yuanshi, Deegaanka Yuanshi, Magaalada Shijiazhuang, Hebei Prov, Shiinaha
waad nala soo xiriiri kartaa
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan Xuquuqda ayaa Leh.
Ku dhufo raadinta ama ESC si aad u xirto